Raikipohy tsotra tsy takatry ny be diplaoma | NewsMada
Tontolo roa goavana indrindra sady anisan’ireo antoka ahafahana mampandroso firenena iray ny kolontsaina sy ny fanabeazana. Ho an’ny mpanjanatany, tsy misy zavatra hafa eo alohan’ireo. Ho an’ny tany zanahina na voazanaka kosa, ialohavana toekarena sy politika ny resaka kolontsaina sy fanabezana. Tsy takatry ny be diplaoma, hono, io raikipohy mifamadika io, ka izay no mahatonga ny tany voazanaka tsy ho tafavoaka mihitsy na manana harena mandifotra azy aza. Ohatra mivandravandra sy tsy hay takonana ny mahazo an’i Madagasikara tato anatin’ny taona maro.
Tsy afa-mijoro intsony ny firenena iray sy ny mponina ao aminy rehefa potika ny kolontsaina sy ny fanabeazana ao aminy. Raikipohy hain’ny firenena « lehibe » io, saingy tsy lazainy amin’ireo be diplaoman’ny tany « madinika ». Na zavatra diso tanteraka aza ny ambaran-dry zareo « vaventy », noho ny fahapotehan’ny kolontsaina sy ny fanabeazana, tsy vitan’ny tsy manan-kolazaina ry be diplaoma isany fa manjary kofehy manara-panjaitra sy boloky mpamerin-teny fotsiny.
« Hanome fanampiana izao (tanisaina ny vola, zavatra, sns) anareo tany mahantra izahay ho fitsinjovana ny maha olona », hoy ilay feo miainga avy any ampitan-dranomasina any. Tsy takatry ny sain-dry Malagasy be diplaoma ve fa tsy mahantra velively izany i Madagasikara ? Valiny, takany, saingy tsy afa-manoatra sy manohitra izy ireo satria izay no lazain’ny tarehimarika rehefa natao ny kajikajy rehetra. Sokajina ho tany mahantra « hono » rehefa latsaky ny izao sy izao ny harinkarena faobe na ny PIB ao aminy. Izay ilay nianarana tany am-pianarana ka nahazoana diplaoma… Kanefa tena izay ve ny marina ? Mahantra tokoa ve i Madagasikara?
… Nohalavirin’ny Malagasy toy ny fasambao ny mitrosa sy ny mametraka izany ho an’ny taranany. Taty aoriana anefa, hafaliana sy haravoana tsy misy toa izany ny an-dry be diplaoma rehefa maharesy lahatra ireo mpamatsy vola ka mahazo trosa. Hafahafa !